Izaziso Zokuvakasha - World Tourism Portal
Ngo-Agasti 18 ku-Around 0804H, isiqubulo soMhlaba sanyakazisa isifundazwe sasePhilippine iMasbate, sabulala iphoyisa elidala lalimaza abanye abangu-6.6.
I-Boeing 737 eyayibuyela eningizimu yeNdiya isuka eDubai, yeqa khona nje umgwaqo owakhiwe imvula ogcwele iKozhikode, wehla intaba waqhekeka phakathi. Iziphathimandla zaseNdiya zithi abantu abangu-18, okubandakanya bobabili abashayeli bezindiza, babulawa kwathi abangu-150 balimala.
UMengameli waseLebanon uMichel Aoun uthe kuzomenyezelwa isimo esiphuthumayo samasonto amabili kulandela ukuqhuma okukhulu okwenzeka eBeirut kwashona okungenani abantu abayi-100 kwalimaza abanye abangama-4,000. Kuze kufinyelele kuma-300,000 asele engenamakhaya.
NgoJuni 2 2020
Ukuxabana okunodlame phakathi kwamaphoyisa nokwanda komphakathi e-US. Imibhikisho yemini enkulu enokuthula iye yangena odlameni nasezinxushunxushwini ngemuva kokumnyama, naphezu kokuvalwa kwendawo kanye nokuqothulwa kweNational Guard ezweni lonke, kulandela ukushona kukaGeorge Floyd. Ukuqapha kufanele kuthathwe lapho uhamba ezindaweni ezithintekile.
Kwangathi i-22 2020
Indiza yePakistan International Airlines ishayeke eduze kwesikhumulo sezindiza sasePakistan. Indiza eyayivela edolobheni elisempumalanga yeLahore yayithwele abagibeli abangama-99 namalungu ayisishiyagalombili abasebenza kuwo, futhi yashayeka eduze nedolobha elingasogwini laseKarachi.
Iziphepho ezibulalayo eMississippi naseLouisiana. Babangele ukulimala “okuyinhlekelele” nokufa okungenani kwabantu abayisikhombisa ngemuva kokuthinta ngeSonto, kusho izikhulu eziphuthumayo. Kuze kube manje, izikhulu zithi amakhulukhulu ezinhlaka ezilinyazwe yiziphepho.
Kuqubuke intaba-mlilo i-Anak Krakatau (Ingane yeKrakatau) eLampung ngoLwesihlanu. Kwakukhishwa ikholamu nentuthu engamamitha ayi-200 ukuphakama lapho nje ukungena okuyingxenye kuqale ukusebenza e-Indonesia ukuzama ukunciphisa ukusabalala kwe-COVID-19.
Isishingishane saseTropical uHarold sihlasela iVanuatu. Kwakungesinye sezivunguvungu eziqine kakhulu ezake zehla ngokuwa esizweni esincane sasePacific, kwaphoqa uhulumeni ukuthi amise izindlela zokuphambuka komphakathi we-coronavirus.
Mashi 30 2020
Kunokubekwa ekhaya nsuku zonke endaweni kusuka ngo-10pm kuze kube ngu-5 ekuseni. Isikhumulo sezindiza iNadi sivalele kuzo zonke izindiza ezihleliwe. Kusukela ngomhlaka 29 Mashi, kwethulwe izindlela zokunciphisa umkhawulo wohambo lwangaphakathi, kubandakanya nokumiswa kwabo bonke uhambo lokuya eziqhingini zangaphandle zeFiji. Uma uhlala eziqhingini ezingaphandle, akunasiqiniseko sokuthi uzokwazi ukuhamba isikhashana
Mashi 27 2020
Kusukela ngomhlaka 18 Mashi, isikhathi sokufika ekhaya siqale ukusebenza ngo-6pm kuye ku-6 ekuseni. Phezu kwalokhu, zonke izikole, ikhefi, izindawo zokudlela nezindawo zemidlalo zivaliwe. Izinkomfa, imikhuleko yomphakathi nemicimbi ikhanseliwe. Kusukela ngomhla ka-22 Mashi kube sekuqale isikhathi sokuvalelwa okuyisibopho, okusho ukuthi phakathi kuka-6 ekuseni no-6pm, abantu bavunyelwe kuphela ukushiya indawo yabo yokuhlala beyokwenza imisebenzi ebalulekile, njengokuthenga izimpahla noma ukuphuma bayothola imishanguzo yokwelashwa. Ukuhamba phakathi kwamadolobha nezifunda akuvunyelwe. Izindiza phakathi kweTunisia nawo wonke amanye amazwe zizomiswa ngoMashi 18. Imingcele yase Maritime isivele ivaliwe.
NgoMashi 19 iHaiti yamemezela ukuvalwa kwawo wonke umhlaba, ulwandle nemingcele yomoya kubahambi. Kwehliswa imingcele yezinsuku eziyi-14 kubahambi abavela emazweni athintekile. Kusukela ngomhla ka-20 Mashi, isikhathi sokufika ekhaya phakathi kuka-8pm no-5am sisendaweni. Kunqatshelwe yonke imicimbi / imihlangano yabantu abangaphezu kwe-10.
Izakhamizi zakwamanye amazwe eziphethe ipasipoti yaseChina ekhishwe yizifundazwe zaseHubei / Zhejiang noma ezivakashele la mazwe / izifunda noma izindawo ezingakapheli izinsuku eziyi-14 zokufika ngeke zikwazi ukufika eJapan. Ukuqala ngo-Mashi 21, izihambi ezivela kumalungu angama-26 emazweni ase-Schengen ase-Europe, e-Ireland, e-Andorra, e-Iran, eBrithani, e-Egypt, eCyprus, eCroatia, eSan Marino, eVietnam, eBulgaria, eMonaco naseRomania kuzodingeka ukuthi zizimele zodwa izinsuku eziyi-14 Izikhungo ezivunyelwe yiziphathimandla zaseJapan. Izinyathelo zasendaweni sezikhona ukwehlisa ukusakazeka kwaleli gciwane, njengokuvinjwa kwemicimbi emikhulu yamasiko nezemidlalo, enjengeMidlalo yama-Olimpiki
IFrance ivale imingcele yayo kubo bonke kepha izakhamizi zaseFrance zivunyelwe ukuthi zibuyele ekhaya. UMongameli u-Emmanuel Macron unqume ukuthi kuvalwe konke okuseduze, wayala abantu ezweni ukuthi bahlale ekhaya izinsuku ezingafika ku-15 - bangakwazi ukwenza amakhaya abo ukwenza imisebenzi ebalulekile. Ukugcwalisa isiliphu semvume manje kuyadingeka. Izindiza phakathi kweFrance nezindawo zayo zaphesheya kwezilwandle ziyekile ukufika ngomhlaka 15 Ephreli.
Ngomhlaka 27 Mashi, uNdunankulu uScott Morrison umemezele ukuthi i-Australia izokwabeka bonke abantu abafikayo emahhotela amasonto amabili. Kusukela phakathi kwamabili zingama-25 kuNdasa (March), eminye imizamo izokwenziwa ukumisa ukusatshalaliswa kwe-COVID-19 e-Australia, kubandakanya nokuvalwa kwamabhizinisi amaningi. Lokhu kufaka phakathi izikhungo zomphakathi, indali, izindlu ezivulekile, amapaki okuzijabulisa, izindilinga, izindawo zokudlala zangaphakathi nezangaphandle, amachibi okubhukuda, nemisebenzi yokuzivocavoca yasendlini, imitapo yolwazi, izitolo zokushunqa, izitho zomzimba, izinkantolo zokudla (ngaphandle kwezinsizakalo zokuthatha uhambo), izindawo zokuphola, izindawo zokuphuma , nemipheme phakathi kwezinye izinyathelo. Izinwele nezinwele zokugunda zinokuhlala zivulekile. Ukuqeqeshwa komuntu siqu nangamakamu ebhuthini kungaqhubeka namaqembu abantu abangaphansi kwe-10. Ukugcina isibalo sabantu sibuthana ubuncane, amaphathi ezinsuku zokuzalwa, izitolo zokudla kanye nemicimbi yezindlu kuvinjelwe, nemishado inqunyelwe kubantu abahlanu futhi imingcwabo ikhawulelwe ku-10. Ukusakazwa komphakathi kumele kubhekwe bonke abakhona. Abantu base-Australia batshelwe ukuthi bazohlala ekhaya ngaphandle kokuthi kuwukuphuma okubalulekile, kufaka phakathi umsebenzi, ukuyothenga izitolo, noma ukuqokwa kwezokwelapha. Izikole zisavulekile kepha zizonikeza inhlanganisela yebanga nokufunda ngaphakathi komuntu. Kuzokwenziwa imizamo ukuze othisha ababuthakathaka kungafanele baye emsebenzini. Lesi akusona isigaba sokugcina sokuvalwa, futhi kulindeleke ukuthi izinyathelo eziqinile zizoqhubeka ukuklanywa.
Mashi 26 2020
Kusukela ngoLwesihlanu Mashi 20, labo abavakashele e-UK, e-Iran, e-Italy, eVictoria, eSpain, eFrance, eJalimane, eSouth Korea naseSwitzerland ngezinsuku eziyi-14 ezedlule ngeke bavunyelwe ukungena noma badlule e-Indonesia. Bonke abavakashi bayadingeka ukuthi bethule isitifiketi sabo sezempilo lapho bangena. Ukwehluleka ukwethula isitifiketi sezempilo kungaholela ekutheni wenqatshelwe ukungena noma ukuhambisa e-Indonesia. Kunezinyathelo ezinomkhawulo ezikhona kulesi sigaba, kodwa kulindeleke ukuthi kube namacala amaningi angakhonjwa, achaza izinga lokufa eliphakeme ngendlela engajwayelekile.
Ngenxa yalubhadane lwe-COVID-19, uhulumeni waseTurkey wethule imikhawulo yokunciphisa ukusabalala kwaleli gciwane. Abagibeli (ngaphandle kwabokufika noma abahlali baseTurkey) abadlula ezweni lase-UK, noma kwamanye amazwe lapho iziphathimandla zaseTurkey zibeke umthetho oqondile wokuvinjwa kwendiza, ezinsukwini eziyi-14 ezedlule abavunyelwe ukuhamba noma ukungena eTurkey. Bheka nezindiza zakho ukuthola imininingwane esesikhathini, njengoba uhlu lwamazwe lushintsha ngokushesha. ETurkey kunesikhathi okufanele sibekelwe ngaso abantu abangaphezu kweminyaka yobudala engama-65 noma abanesimo esingalapheki sokwelashwa. Abantu okufanele bahambe noma bashiye ikhaya bangenza kanjalo ngemuva kokucela imvume esemthethweni ngezintambo zocingo eziqokiwe: 112, 155, no-156.
Emzameni wokunqanda ukusakazeka kwe-coronavirus, iGibhithe selishukumisele ukumisa konke ukuthathwa kwezindiza ezweni lonke lezindiza eziqala ngoLwesine, Mashi 19 emini futhi kuqhubeke kuze kube ngoMashi 31. Kusukela ngomhlaka 26 Mashi, isonto elilodwa, amahora angamahora ayi-11 azothathwa ekhaya. indawo phakathi kuka-7pm kuze kube ngu-6 ekuseni. Eminye imikhawulo ikhona futhi kubandakanya imithetho ezungeze imibuthano yomphakathi, izikole, amanyuvesi, amathofi, imigoqo kanye nezitolo ezinkulu. Landela izeluleko zeziphathimandla zasekhaya njengoba lezi zinyathelo ziba namandla ngokwengeziwe.
Ukuhlangana kwabantu abangaphezu kwe-10 kuvinjelwe eJamaica kuze kube kuphinde kwakhishwa. Noma ngubani ongene eJamaica evela emazweni akhathazekile ngomhlaka 18 Mashi, kulindeleke ukuthi azihlukanise yedwa izinsuku ezingama-21 kusukela ngosuku afika ngalo.
Izindiza eziya eSri Lanka zimisiwe kusukela ngomhlaka 19 Mashi. Noma ngubani ofika eSri Lanka evela e-UK namanye amazwe amaningi uzokwenqatshelwa ukungena noma ukuvalelwa yedwa egadwe amasosha izinsuku eziyi-14, ngoMashi 16. Lokhu kuzoqhubeka kuze kube kuphinde kwaqashelwa eColombo, Gampha naseKalutara. Uhulumeni ukuqinisekisile ukuthi abahambi abaphethe ithikithi lendiza elivumelekile bazovunyelwa ukuya esikhumulweni sezindiza ngezikhathi zokufika ekhaya. EPuttalam naseSifundazweni SaseNyakatho isikhathi esibekelwe ukukhulunyelwa kuzothuthukiswa isikhashana phakathi kuka-6 ekuseni nantambama ngolwe-27 Mashi
Isikhathi esibekelwe kwezinye izindawo sizothuthukiswa okwesikhashana phakathi kuka-6 ekuseni kuze kube semini ngomhlaka 26 Mashi.
Uma useMyanmar futhi uyakwazi ukuhamba, kufanele ukwenze lokho ngokushesha okukhulu ngenxa yezingcindezi ezingaba khona ezikhungweni zezokwelapha kanye nengozi yezindiza eziphuma eMyanmar ikhanseliwe. Yonke imingcele yezwe namazwe angomakhelwane yavalwa ngoMashi 19. Kusukela ngomhla zingama-24 kuNdasa kunezindlela ezintsha zokunqanda okwesikhashana. Bonke abantu bakwamanye amazwe abangenayo bayadingeka ukuthi bethule isitifiketi sobufakazi bokuthi abanayo i-COVID-19, okumele ikhishwe kungakapheli amahora angama-72 ngaphambi kohambo. Zonke izivakashi zakwamanye amazwe ezifika eMyanmar zizofakwa kuhulumeni izinsuku ezingama-14 zokuba yedwa. Abahambi abavakashele eChina noma eRiphabhulikhi yaseKorea ngeke bavunyelwe ukungena.
Kusukela ngomhla ka-26 Mashi, Isikhumulo Sezindiza saseNadi sizovala kuzo zonke izindiza ezihleliwe. Ezinye izindlela zethulwe zokwehlisa umendo wokuhamba ngaphakathi, kubandakanya nokumiswa kwabo bonke uhambo lokuya eziqhingini zangaphandle zeFiji kusukela ngomhlaka 29 Mashi. Uma uhlala eziqhingini ezingaphandle, akunasiqiniseko sokuthi uzokwazi ukuhamba isikhashana.
Izindiza zomhlaba wonke zizomiswa ngaphakathi nangaphandle kwePakistan kusuka ngomhlaka 21 Mashi kuze kube 4 Ephreli, 2020. Izindiza zasemakhaya zizomiswa ukusuka ngomhlaka 26 Mashi kuze kube 2 Ephreli, 2020. Kwethulwe izindlela ezimbalwa zokunciphisa ukusabalala kwaleli gciwane kubandakanya nokuvalwa kwezikole. , futhi uvimbele ukuhlangana komphakathi. Lezi zinyathelo ziya ngokuya ziqine, futhi kubalulekile ukuhlala usesikhathini nabezindaba bendawo njengoba isimo senzeka.
I-Argentina yethule ukubekwa kwabantu ezweni lonke ukuhlala phakathi kwamabili ngoMashi 19 kuya phakathi kwamabili angama-31 kuNdasa. Ngalesi sikhathi, abantu bazokwazi ukushiya amakhaya abo beyothenga izidingo, ezifana nemithi noma ukudla, endaweni yangakubo. Noma ngubani ngaphandle kwendawo yakhe yokuhlala ongakwazi ukunikeza izizathu angabekwa icala lokwenza icala lezempilo lomphakathi. NgoMashi 15, i-Argentina yamemezela ukuthi izovala imingcele yayo kubo bonke abokufika abangenayo okungenani amasonto amabili. Izindiza eziningi zaphesheya nazo zimisiwe.
Imikhawulo yokunyakaza kweviki elilodwa isendaweni ukusuka ngomhlaka 24 Mashi. Abantu kumele bahlale ezindlini ngaphandle kwezimo eziphuthumayo noma ukuthenga okubalulekile. Uma utholakala wephula imithetho, ungabhekana nesigwebo sasejele kanye / noma inhlawulo. Ukufika kwe-Visa kubo bonke abokufika abangena kuleli ngokusebenzisa indawo ye-Tribhuvan International Airport (TIA) kubamisiwe ukusuka ngomhlaka 14 Mashi kuya kumhla zingama-30 ku-Ephreli. Bonke abantu abavela kwamanye amazwe abane-visa esemthethweni yaseNepal kufanele balethe isitifiketi sezempilo se-PCR esikhishwe ngezinsuku eziyisikhombisa ngaphambi kosuku lwabo lokufika eNepal futhi kufanele balethwe ehhovisi lezokufika eTIA. Bonke abantu bakwamanye amazwe abangena eNepal kusuka ngoMashi 14, 2020 bahlala ngaphansi kwezinsuku eziyi-14 ukusuka ngosuku abafika ngalo.
IChile imemezele ngeSonto zingama-22 kuNdasa (March) ezweni lonke, isikhathi sokufika ekhaya ukuze abantu bangahambi emigwaqweni njengoba inani lamacala e-COVID-19 liya landa. Isikhathi sokufika ekhaya sizobe sikhona ukusuka ngo-10pm kuye ku-5 ekuseni. Izinyathelo zokuhlukanisa izifunda eziningana zezwe zifaka phakathi isiqhingi saseChililoe, 'sanonic cordon' ezungeze idolobha laseChillan, nasePuerto Williams ePatagonia. Ukumenyezelwa kwabantu kwahlukaniselwa ukuthi kuzungezwe i-Easter Island ngomhlaka 23 Mashi. Izifunda zomasipala eSantiago of Providencia, Las Condes naseVitacura nazo zingaphansi kolawulo oluqinile. NgoLwesithathu ngomhlaka 18 Mashi, 2020 imingcele yaseChile ivaliwe kubantu bakwamanye amazwe, kwathi uMongameli wamemezela 'iZwe Lezwe Lezinhlekelele' lezinsuku ezingama-90.
Zonke izindiza zomhlaba wonke eziya nokubuya eBolivia zimisiwe, futhi zonke iziphambano zomngcele womhlaba zivaliwe. IBolivia isesimweni esibucayi, futhi kunezinyathelo ezibucayi eziqhubekayo ezenziwayo. Ngomhlaka 25 Mashi, isimo sezimo eziphuthumayo sanikezwa isimemezelo kuze kube umhlaka 15 Ephreli. Kusukela ngomhla ka-26 Mashi, umuntu oyedwa endlini ngayinye uzovunyelwa ukuphuma ayothenga ukudla, phakathi kwamahora we-7am no-12pm (ntambama). Umuntu kufanele abe phakathi kweminyaka yobudala eyi-18 nengama-65, futhi imithetho lapho izinsuku umuntu angaphuma ngazo endlini isuselwa kunombolo yokugcina yekhadi lakho lomazisi noma ipasipoti.
Ukuvalwa kwendawo ezweni lonke kwenziwe ezinsukwini ezingama-21 kusukela ngoLwesine, Mashi 26, ekuphenduleni i-COVID-19, uhulumeni waseNingizimu Afrika uzobeka imingcele eqinile yokuhamba phakathi kweNingizimu Afrika namazwe amaningana abonwe njengengozi enkulu. Ama-visa avela kwamanye amazwe asengozini enkulu, kufaka phakathi i-USA, azohoxiswa kusukela ngeSonto, Mashi 15.
Mashi 25 2020
UNdunankulu uMatusz Morawiecki usememezele izindlela ezintsha, wavimbela ukubuthwa kwabantu abangaphezulu kwababili kusuka ngoMashi 25. Ukuqinisekisa ukuhamba kwabantu, ezinye izinyathelo zifaka umkhawulo wenani labagibeli ezithuthi zomphakathi ziye kuma-50% amandla esihlalo. Kusukela ngoMashi 15, bonke abantu bakwamanye amazwe bavinjelwe ukungena ePoland izinsuku eziyishumi ukunciphisa umkhawulo wokusakazeka kwe-coronavirus (COVID-19). Zonke izakhamizi zasePoland nabahlali bazovunyelwa ukubuyela kuleli kepha bazodingeka ukuthi babekelwe abantu bodwa izinsuku eziyi-14.
Kusukela ngoMashi 25, uNdunankulu uNarendra Modi ubize ukuthi kube nokuvalwa ngokuphelele eNdiya izinsuku ezingama-21 ukunqanda ukusakazeka kwezifo ze-COVID-19. Ukusuka ngoMashi 13, 2020, uhulumeni waseNdiya umise wonke ama-visa akhona, ngaphandle kosopolitiki, isikhulu, i-UN noma iNhlangano Yezizwe, ukuqashwa kanye nama-visa eprojekthi, kuze kube ngu-Ephreli 15, 2020.
Mashi 24 2020
Isimo Sezimo Eziphuthumayo samenyezelwa ngomhla zingama-20 kuNdasa ukuze uHulumeni wasePortugal akwazi ukusebenzisa izindlela zokunciphisa ukusabalala kwe-COVID-19 kulo lonke elasePortugal. Lokhu kufaka imikhawulo yokuhambahamba ezweni lonke, kuthinta izindawo zomphakathi nezokuhamba. Le mikhawulo izoba khona emavikini amabili okuqala, futhi ingandiswa. Izitolo eziningi, ngaphandle kwalapho zithengisa ukudla noma ezinye izinto ezibalulekile njengamakhemisi, zivaliwe. Abantu bayalwe ukuba bahlale ekhaya ngaphandle kokuthi badinge ukuthenga ukudla noma ezinye izinto ezibalulekile, baye emsebenzini (uma bengakwazi ukusebenza besuka ekhaya), baye esibhedlela noma ezikhungweni zezempilo, benze imisebenzi yokunakekela noma efanayo noma uma kunesidingo sangempela , ukubuyela endaweni yokuhlala okuyiyona, ukuzivocavoca ngaphandle nokuhamba ngezilwane ezifuywayo, isikhathi esifushane futhi angikaze kube ngamaqembu. Ukulawulwa kwemingcele emngceleni wezwe neSpain kusendaweni. I-Algarve Regional Health Authority imemezele ukuthi kusukela zingama-22 kuNdasa, zonke izakhamizi ezifika eSifundeni SaseFaragi zizohlala ngaphansi kwezinsuku eziyi-14. Abahambi abafika ezifundeni zesiqhingi zaseMadeira kanye nase-Azores bazoba ngaphansi kokuxilongwa kwezempilo nokuzibekelwa indawo eyedwa isikhathi esiyizinsuku eziyi-14. Imikhumbi yokuhamba ngesikebhe kanye nezikebhe ngeke kuvunyelwe ukuba semkhunjini kunoma yimaphi amachweba eMadeira, ePorto Santo noma e-Azores. Ukuhamba ngemikhumbi kungangena emachwebeni ePortugal yezwe, kepha abagibeli bangakwehla kuphela uma bengabezizwe noma abahlali basePortugal. Kusukela phakathi kwamabili ngomhlaka 18 Mashi, izindiza ezisuka ePortugal ziya emazweni angaphandle kwe-EU / EEA, ngaphandle kwe-UK, USA, Canada, Venezuela, South Africa kanye namazwe akhuluma isiPutukezi, zizomiswa. Izindiza eziya eBrazil zizokhawulelwa eRio de Janeiro naseSão Paulo. Izindiza eziya nokubuya e-Italy zihlala zimisiwe.
Mashi 23 2020
Ihhovisi Langaphandle & I-Commonwealth (i-FCO) leluleka izakhamuzi zaseBrithani ngokumelene nakho konke kodwa okubalulekile ukuhamba ezweni. Noma yiliphi izwe noma indawo ingakhawulela ukuhamba ngaphandle kwesaziso, futhi izeluleko zabo kwizakhamizi zase-UK ukuthi uma njengamanje uya phesheya, buyela ekhaya manje, lapho futhi kusenezindiza. Kubahambi noma abahlali abakhona ngaphakathi e-UK, kuye kwavalwa indawo, kucelwa abantu ukuthi bahlale ezindlini zabo zokugcina futhi bagweme konke ukuhamba okuhamba phambili ngaphandle kwekhaya. Undunankulu, uBoris Johnson, uzoyalela amaphoyisa ukuthi enze umthetho wokuvalwa kwe-COVID-19 onqenqemeni, uvimbele ukubuthana kwabantu abangaphezu kwababili futhi ubeke nemingcele eqinile ekuzivocavoca.
“Ukuhamba ngokubalulekile akubandakanyi ukuvakashela amakhaya wesibili, amakamu, amapaki we-caravan noma okufanayo, kungaba ngenhloso yokuzihlukanisa noma amaholide. Abantu kufanele bahlale ezindlini zabo zokuhlala eziyinhloko. Ukungazithathi lezi zinyathelo kufaka ingcindezi eyengeziwe emiphakathini nakumasevisi asesengozini.
Ukusuka ngoMashi 13, uHulumeni waseJamaica ukhawulele ukuhambela nokubuya e-United Kingdom, China, Italy, South Korea, Singapore, France, Spain, Germany, nase-Iran. Kusuka ngoMashi 18, bonke abahambi befika bevela emazweni lapho okudluliselwa khona kwe-COVID-19 kudingeka ukuthi bazihlukanise izinsuku ezingama-14.
Ukuqala ngoMashi 22, 2020, bonke abahambi bobabili abahlala kwamanye amazwe kanye nabahlali baseThai (kungakhathalekile ukuthi amazwe abasuka kuwo) bayadingeka ukuthi bethule isitifiketi sezokwelapha esisayinwe ngudokotela wezokwelapha esingaqinisekisi ukuthi kukhona ubufakazi bokutheleleka nge-coronavirus emahoreni angama-72 edlule, nobufakazi bokuthi umshuwalense wokuvakasha ongaphansi kwe- US $ 100,000 ohlanganisa i-COVID-19. Ukwehluleka ukufeza lezi zidingo kuzosho ukuthi abagibeli abavunyelwe ukugibela indiza yabo. NgoMashi 21 uMbusi waseBangkok wamemezela izinhlobo zezindawo ezingama-26 ezizovalwa kuze kube ngu-Ephreli 12. Lokhu kubandakanya izindawo zokuthenga, izindawo zokudlela, amahholo okudla nezindawo ezifanayo zokusebenzisa ukudla, izindawo zezinwele, amachibi okubhukuda, amabala wegalofu nezindawo zokugcoba izindiza. Izitolo ezinkulu, izitolo ezidayisa ukudla nemikhiqizo emisha, izinsizakalo zokuthatha indawo yokudlela, amakhemisi nolunye ibhizinisi elithengisa izinto ezibalulekile azikhulunyelwa imihlahlandlela. Izifundazwe ezungeze iBangkok zizosebenzisa izinyathelo ezifanayo ngasikhathi sinye. Umbusi we-Chaing Mai wasebenzisa izindlela ezifanayo ezizosebenza ukusuka ngoMashi 23 kuze kube ngu-Ephreli 13.
Mashi 22 2020
Ukuzamazama komhlaba okuyisilinganiso esingu-5.3 eZagreb kuyinto enkulu kunazo zonke ethinta leli dolobha eminyakeni engu-140, kulimaza izakhiwo futhi kushiye izimoto zidilikile ngenxa yokwehla kwezakhiwo.
IChile imemezele ngeSonto zingama-22 kuNdasa (March) ezweni lonke, isikhathi sokufika ekhaya ukuze abantu bangahambi emigwaqweni njengoba inani lamacala e-COVID-19 liya landa. Isikhathi sokufika ekhaya sizobe sikhona ukusuka ngo-10pm kuye ku-5 ekuseni. Izinyathelo zokuhlukanisa izifunda eziningana zezwe lapho amacala e-COVID-19 angaqinisekiswanga khona, kufaka phakathi nesiqhingi saseChiloe nasePuerto Williams ePatagonia. NgoLwesithathu 18 Mashi, 2020 imingcele yaseChile ivaliwe kubantu bakwamanye amazwe.
Ukusuka ngo-12pm uMsombuluko zingama-23 kuNdasa (March), i-Australia ivala izinsiza ezingabalulekile njengoba amacala e-coronavirus enyuka ngokushesha ezweni. Lokhu kufaka imigoqo, izindawo zokudlela, ama-cinema, amaklabhu, indawo yokuzivocavoca nezindawo zokukhulekelwa. Ezinye izindawo zokudlela kanye namakhekhe kuzohlala kuvulekile, kepha kuphekwe kuphela okuthathwa kuphela. Uhulumeni waseWestern Australia umemezele ukuthi izovala imingcele yayo kusukela nge-1: 30 pm (AWST) ngoLwesibili ngoMashi 24, yize noma ikhululiwe izofaka isicelo sokwenza imisebenzi ebalulekile nezisebenzi. Ukufika kokunye kuzodingeka ukuthi kuzihlukanise izinsuku eziyi-14, futhi ukulawulwa kwemingcele kuzosebenza kuyo yonke imigwaqo, umoya, ujantshi kanye nezindawo zokufinyelela olwandle. Uhulumeni waseNingizimu Melika umemezele "isimo esiphuthumayo esikhulu" futhi wamemezela ukuthi uzosungula imingcele eyi-12 lapho abahambi bezindawo lapho kuzodingeka basayine isimemezelo ngempilo yabo kanye namandla abo okuzenzela amasonto amabili. Lezi zinyathelo zizoqala ukusebenza ngo-4 ntambama ngoMashi 24. Kusukela ngoMashi 20, bonke abahambi bayoamiswa ukungena e-Australia ngaphandle kwezakhamizi zase-Australia noma izakhamuzi zaphakade nomndeni oseduze. Bonke abahambi abaya e-Australia bayacelwa ukuba bazihlukanise izinsuku eziyi-14, kungaba sekhaya noma ehhotela. Iningi labasebenza izindiza baqala ukumemezela ukuthi izindiza zomhlaba wonke eziya / zivela e-Australia zimisiwe noma zizomiswa maduze.
Mashi 21 2020
IGermany iqinisile imikhawulo yokulawula imingcele ezikhumulweni zezindiza nasemingceleni yomhlaba. Ngaphandle kokuthi abahambi bahlala eJalimane, bangakhombisa isizathu esinamandla sokuhambela kwabo eJalimane, noma abasebenzi abasemngceleni behamba phakathi kweJalimane namazwe angomakhelwane, bazokwenqatshelwa ukungena. UNgqongqoshe Wezempilo waseJalimane uxwayise ukuthi bonke abantu eJalimane abeyindawo ebeka engcupheni kakhulu kulezi zinsuku eziyi-14 ezedlule, noma abasondelene nomuntu oye wahlola ukuthi une-COVID-19, kufanele bazihlukanise amasonto amabili.
Umngcele womhlaba phakathi kwe-US neMexico uzovala phakathi kwamabili ngoMgqibelo Mashi 21 kuzo zonke izimoto ezingabalulekile izinsuku ezingama-30. Futhi sicela wazi ukuthi ezinye izindiza zibeka imikhawulo yazo eyengeziwe kubahambi, ehlukile imihlahlandlela kahulumeni yaseMexico. Le mikhawulo ingasebenza ezindizeni zasekhaya nakwamanye amazwe.
Mashi 20 2020
NgoMashi 19, iArgentina yathula indawo ebekelwe abantu ezweni lonke kusukela phakathi kwamabili ngoLwesine Mashi 19 kuya phakathi kwamabili ngoLwesibili Mashi 31. Ngalesi sikhathi, abantu bazokwazi ukushiya amakhaya abo beyothenga izidingo, njengomuthi noma ukudla, endaweni yabo indawo. NgoMashi 15, i-Argentina yamemezela ukuthi izovala imingcele yayo kubo bonke abokufika abangenayo okungenani amasonto amabili. Ukuqala ngoMashi 17, i-Argentina izovimbela zonke izindiza zaphesheya kwezilwandle ezivela eYurophu, e-United States, China, Japan, South Korea nase-Iran ezinsukwini ezingama-30 ezizayo, kube nezindiza eziphumayo kulezo zikhombandlela ezingathinteka. Noma ngubani ovela kula mazwe angenhla kuzodingeka ukuthi ahlukaniswe yedwa izinsuku eziyi-14, njengoba kuzo zonke izakhamizi ezikhombisa izimpawu ze-coronavirus noma zixhumane namacala aqinisekisiwe noma angabonakala.
Iziphathimandla zaseNew Zealand zimise zonke izivakashi, ngaphandle kokubuya eNew Zealanders, ukusuka ekugibele indiza ziye eNew Zealand kusuka ngo-11: 59 pm isikhathi sendawo ngoMashi 19. Abalingani babo, abagcini bezomthetho noma noma yiziphi izingane ezincikezi ezihamba nabo bangabuya. Izakhamuzi ezibuyayo nezakhamizi kudingeka ukuthi zizenzele izinsuku eziyishumi nane zifikile.
Ukuqala ngoMashi 20, bonke abahambi bayoamiswa ukungena e-Australia ngaphandle kwezakhamizi zase-Australia noma izakhamuzi zaphakade nomndeni oseduze. Bonke abahambi abaya e-Australia bayacelwa ukuba bazihlukanise izinsuku eziyi-14, kungaba sekhaya noma ehhotela. Thola imininingwane eminingi lapha. Iningi labasebenza izindiza baqala ukumemezela ukuthi izindiza zomhlaba wonke eziya / zivela e-Australia zimisiwe noma zizomiswa maduze.
IMyanmar ibeke imikhawulo emisha: abahambi abasanda kuvakashela iFrance, i-Itali, i-Iran, iSpain kanye neJalimane bazobekwa ezikhungweni ezihlukaniswe nguhulumeni izinsuku eziyi-14 lapho befika; Abahambi abasanda kufika eMelika bazobhekwa izinsuku eziyi-14; futhi abahambi abavakashele eChina noma eRiphabhulikhi yaseKorea ngeke bavunyelwe ukungena.
Mashi 19 2020
IPhilippines isimemezele isimo esiphuthumayo sezempilo ngemuva kokukhathazeka ngokuthi i-novel coronavirus ayisakazeki enhlokodolobha iManila nasezindaweni eziseduze nayo. NgoMashi 16, uMongameli uRodrigo Duterte wafaka sonke isiqhingi sasePhilippine eLuzon ngaphansi “kokuhlaliswa kwabantu okuthuthukile” kuze kube ngu-Ephreli 12 ukuvimba ukusakazeka kwezifo ze-coronavirus. Ukuhamba komphakathi kuzovinelwa kuphela ekuthengeni ukudla, umuthi kanye nezinye izinto ezibalulekile ezidingekayo ukuze usinde. Ngomhlaka 18 Mashi, uHulumeni wasePhilippine wabuyekeza imikhawulo yawo yokuhamba futhi wamemezela ukuthi abantu bangaphandle bazokwazi ukuphuma ePhilippines nganoma yisiphi isikhathi ngesikhathi sokuvalelwa bodwa.
UMengameli waseChile Sebastian Pinera uthe izwe lakhe lizovala imingcele yalo kubantu bakwamanye amazwe ukuqala ngoLwesithathu, Mashi 18.
Kusukela ngoMashi 16 ngo-11:59 pm, akekho noyedwa, okubandakanya izakhamizi nabahlali, ozovunyelwa ukungena e-Ecuador ezinsukwini ezingama-21 ezizayo.
Mashi 18 2020
Iziphathimandla zaseChinese ziyaqhubeka nokuphoqa izindlela ezahlukahlukene zokulawula nokuhlukaniswa kwezwe ezweni lonke, kubandakanya imikhawulo yokuhamba, ukuncishiswa kwezokuhamba, ukulawulwa kokuphuma nokuphuma kwamadolobhana nemizana, kanye nezidingo zokuhamba zodwa phakathi kwezindawo ezahlukahlukene zezwe.
Ukuqala ngoMashi 16, bonke abagibeli abafika eBeijing bevela emazweni aphesheya bayobekwa ngaphansi kwezinsuku eziyi-14.
Ukuqala ngoMashi 16, zonke izindiza zizomiswa phakathi kweDominican Republic ne-UK, kanye neYurophu, China, South Korea ne-Iran. Lokhu kumiswa kuzosebenza ezindizeni ebuya eDominican Republic. Imfuneko yokubekelwa eceleni iyabekelwa izivakashi ebe zikuliphi izwe lakuleli lizwe kumaviki amabili edlule.
Mashi 17 2020
Uhulumeni waseSri Lankan umemezele ukumiswa kwezindiza eziya eSri Lanka kusuka ngoMashi 17. Abantu abafika bevela e-UK, noma sebedabule e-UK, ngeke bavunyelwe ukungena eSri Lanka ngoMashi 16.
Mashi 16 2020
NgoMashi 14 uHulumeni waseJordani wamemezela ukuthi izindiza zezentengiselwano ezingena nangaphandle kweJordani zizoamiswa futhi yonke imingcele yomhlaba kanye nolwandle ivalwe. Kuzoba nokuhlukaniswa okuyimpoqo kubo bonke abafika eJordani kusuka ngoMashi 16.
Ama-Lockdowns, ama-Border Closures, neminye imikhawulo yokuhamba.
Uyacelwa uqaphele: Lolu akulona uhlu oluphelele lwayo yonke imikhawulo - kugxilwe ekuvinjelweni okukhulu, ukuvalwa kwemingcele, nokumiswa kokumiswa kwezindiza, okufanele kushintshe ngokushesha. Sizozama ukugcina lokhu kuvuselelwa ngangokunokwenzeka, kodwa sicela uhlole amawebhusayithi asemthethweni ezwe nemithombo yezindaba yendawo ukuthola imininingwane yakamuva. Uma ungaboni izwe elibhalwe lapha, qiniseka ukuthi ubheka noma imiphi imikhawulo abangaba nayo.
France: Imingcele izovalwa ukuqala ngoLwesibili, Mashi 17: Izakhamizi zicelwe ukuthi zihlale ekhaya izinsuku eziyi-15.
Italy: NgoMashi 9, uNdunankulu wase-Italy, uGiuseppe Conte, umemezele ukuthi yonke i-Italy izofakwa ngaphansi kwezimo ezivaliwe ukuze iqukethe leli gciwane.
Spain: Mashi 14, uhulumeni waseSpain umemezele ukuthi yonke iSpain izobekwa ngaphansi kwezimo ezivaliwe.
I-Czech Republic: ngoMashi 12, i-Czech Republic yavimbela ukungena kwabangewona izakhamizi ezivela emazweni athintekile yi-coronavirus.
Latvia: ukusebenza ngoMashi 17, uhulumeni uzovala imingcele yawo kubo bonke ngaphandle kwezakhamizi zaseLatvia kanye nezakhamizi zaseLatvia eziphethe imibhalo efanelekile yokuba ngumhlali. Akunemikhawulo yokuthi abantu bakwamanye amazwe basuke eLatvia.
I-Denmark: ukuvalwa kwemingcele kuqale ukusebenza kuze kube ngo-Ephreli 13. Izakhamizi zaseDenmark zisazokwamukelwa.
Germany: ngoMashi 16, wavala imingcele yakhe neFrance, i-Austria, neSwitzerland, ngaphandle kwezokuhweba.
Hungary: ukusebenza phakathi kwamabili ngoMashi 16, iHungary izovala yonke imingcele kubantu bakwamanye amazwe. Yizakhamuzi zaseHungary kuphela nezakhamizi zakwamanye amazwe ezinamalungu omndeni waseHungary asemuva abavunyelwe ukungena ezweni.
Ireland: ngoMashi 16, uHulumeni wase-Ireland wamemezela ukuthi bonke abantu, kubandakanya nezakhamizi zase-Ireland, ezingena e-Ireland bevela phesheya kwezilwandle bazocelwa ukuba babeke imingcele ebalulekile yokuhamba kwabo ngezinsuku eziyi-14 lapho befika.
Norway: kusukela ngoMashi 12, bonke abahambi abangena eNorway abavela ngaphandle kwesifunda se-Nordic kumele bazihlukanise amasonto amabili.
EPoland: ukuqala ngoMashi 16, bonke abantu bakwamanye amazwe bavinjelwe ukungena ePoland izinsuku eziyishumi.
Enyakatho naseMelika Ephakathi
Canada: ngoMashi 16, uNdunankulu uTrudeau umemezele ukuthi umngcele uzovalelwa kuwo wonke umuntu kodwa abaseCanada nabaseMelika. NgoMashi 18, uTrudeau wengeza ukuvalwa, wamisa ukuhamba okungabalulekile phakathi kwe-US neCanada.
I-Guatemala: UMongameli umemezele ukuvalwa kwemingcele isikhathi esiyizinsuku eziyi-15 ukuqala ngoMashi 17.
I-united states: kusukela ngoMashi 14, ukuhamba kusuka e-UK nase-Ireland kumisiwe, ngaphezu kwamazwe ayi-26 Schengen Area. Abahambi abakade beya eChina noma e-Iran ezinsukwini eziyi-14 ezedlule ngeke bavunyelwe ukungena.
Colombia: Kuqala uMsombuluko, Mashi 16, izakhamizi ezingewona amaColombia kanye nezakhamizi ezingewona amaColombia zizonqatshelwa ekufikeni eColombia. Bonke abagibeli abafikayo kuzodingeka bazihlukanise izinsuku eziyi-14.
Argentina: Ukuqala ngoMashi 17, i-Argentina izovimbela zonke izindiza zaphesheya ezivela e-Europe, e-United States, China, Japan, South Korea nase-Iran ezinsukwini ezingama-30 ezizayo.
Kenya: ngoMashi 15, uMnyango Wezempilo waseKenya umemezele ukumiswa kwawo wonke amazwe asuka emazweni abike amacala e-COVID-19. Yizakhamizi zaseKenya kuphela ezivunyelwe ukungena ezweni.
Morocco: Ngomhlaka 16 Mashi, uHulumeni waseMorocco umemezele ukuvalwa kwawo wonke amazwe aphesheya kwezilwandle nangaphandle kweMorocco.
Tunisia: Izindiza phakathi kweTunisia nawo wonke amanye amazwe zizomiswa ngoMashi 18. Imingcele yase Maritime isivele ivaliwe.
China: ngoMashi 16, bonke abagibeli abafika eBeijing bevela emazweni aphesheya bayobekwa ngaphansi kwezinsuku eziyi-14.
India: ukusukela ngoMashi 13, 2020, uhulumeni waseNdiya umise wonke ama-visa akhona, ngaphandle kosopolitiki, isikhulu, i-UN noma izinhlangano zamazwe omhlaba, ukuqashwa kanye nama-visa eprojekthi, kuze kube ngu-Ephreli 15, 2020.
Nepal: Ukufika kwe-visa kumisiwe ukusuka ngoMashi 14, 2020 kuya ku-Ephreli 30, 2020. Bonke abantu abavela kwamanye amazwe abangena eNepal kusuka ngoMashi 14, 2020 bahlala ngaphansi kokuhlala yedwa izinsuku eziyi-14 kusukela ngosuku abafika ngalo.
IJordani: kusukela ngoMashi 17 kuze kube sekuphinde kwaqashelwa, zonke izindiza ezihamba ngaphakathi nangaphesheya eziya eJordani zizomiswa.
Australia: Ukuqala ngoMashi 15, kuzoba nesikhathi esiyimpoqo sokuvalwa kwezinsuku eziyi-14 kubo bonke abafika kwamanye amazwe, kanye nokuvinjelwa kokufika komkhumbi ukufika kwamanye amazwe izinsuku ezingama-30.
Malaysia: Ukuqala ngoMashi 18, uhulumeni waseMalawi ubeka imingcele kubo bonke abavakashi bangaphandle kanye nezivakashi. Uhulumeni futhi usebenzisa izindlela zokunqanda ukuhamba ezweni lonke, kubandakanya ukuvimba imibuthano nokuvala amabhizinisi angabalulekile.
E-New Zealand: ukusukela ngoMashi 14, abahambi abasha, abangaphandle, abake baba khona, noma badabula, i-Iran noma izwe laseChina ezinsukwini eziyi-14 ezedlule abakwazi ukungena eNew Zealand. Bonke abanye abahambi kufanele bazihlukanise lapho befika.
Ukuqala ngoMashi 17, i-Argentina izovimbela zonke izindiza zaphesheya kwezilwandle ezivela eYurophu, e-United States, China, Japan, South Korea nase-Iran ezinsukwini ezingama-30 ezizayo, izindiza eziphumayo kulezo zikhombandlela nazo zingathinteka. Noma ngubani ovela kula mazwe angenhla kuzodingeka ukuthi ahlukaniswe yedwa izinsuku eziyi-14, njengoba kuzo zonke izakhamizi ezikhombisa izimpawu ze-coronavirus noma zixhumane namacala aqinisekisiwe noma angabonakala.
Emzameni wokunqanda ukusabalala kwe-coronavirus, iJalimane ivale imingcele yayo neFrance, i-Austria kanye neSwitzerland ngoMsombuluko ekuseni, ngoMashi 16, ngaphandle kwezokuthengisa.
Ukuqala ukusebenza ngoMashi 16, uHulumeni waseMorocco umemezele ukuvalwa kwawo wonke amazwe aphesheya kwezilwandle nangaphandle kweMorocco. Izinsizakalo zabagibeli besikebhe nazo zimisiwe. Ngaphezu kwalokho, imingcele yomhlaba neCeuta neMelilla ivaliwe.
Emzameni wokunqanda ukusakazeka kwe-coronavirus, iGibhithe selithuthe ukumisa konke ukuthathwa kwezindiza ezweni lonke zezindiza zezwe eliqala ngoLwesine, Mashi 19 emini futhi kuqhubeke kuze kube uMashi 31.
Ngenxa yokuqubuka kodaba lwe-coronavirus, imingcele yaseFrance izovalwa kusukela ngoLwesibili, Mashi 16, yize izakhamizi zaseFrance zivunyelwe ukubuyela ekhaya. UMongameli u-Emmanuel Macron unqume ukuthi kuvalwe konke okuseduze, wayala abantu ezweni ukuthi bahlale ekhaya izinsuku ezingafika ku-15 - bangashiya amakhaya abo benze imisebenzi ebalulekile.
Mashi 15 2020
NgeSonto, Mashi 15, uHulumeni waseColombia umemezele ukuthi kusukela ngoMsombuluko, Mashi 16, izakhamizi ezingewona amaColombia kanye nezakhamizi ezingewona amaColombia zizonqatshelwa ekufikeni eColombia. Bonke abagibeli abafikayo kuzodingeka bazihlukanise izinsuku eziyi-14.
Ngokuphendula i-COVID-19, uhulumeni waseNingizimu Afrika uzobeka imingcele eqinile yokuhamba phakathi kweNingizimu Afrika kanye namazwe amaningana athathwa njengengozi enkulu. Njengamanje, lawo mazwe yi-UK, i-Austria, iSwitzerland, i-Italy, iJalimane, iSpain, iNetherlands ne-Iran. Ama-visa avela kwamanye amazwe asengozini enkulu, kufaka phakathi i-USA, azohoxiswa kusukela ngeSonto, Mashi 15.
Uhulumeni wase-US ubeke imikhawulo yezikhathi ezithile lapho ephendula ukuqubuka kwe-COVID-19.
NgoJanuwari 31 - ukungena kuvinjelwe iningi labantu abavela emazweni angaphandle abaya eChina ezinsukwini eziyi-14 ezedlule.
NgoFebhuwari 29 - imingcele yandiswa ukuze ifake bonke abafokazi ababekhona ngokomthetho ngaphakathi kweRiphabhliki Yezwe lase-Iran ngesikhathi sezinsuku eziyi-14 ngaphambi kokungena kwabo noma ukuzama ukungena e-United States.
Mashi 11 - imikhawulo yokuhambela e-United States isuka kubantu bangaphandle abasanda kuba kwelinye lamazwe angama-26 endaweni yaseSchengen (ayisebenzi ezakhamuzini zaseMelika noma izakhamuzi ezingokomthetho ezihlala njalo).
Mashi 13 - UMongameli uTrump umemezele isimo esiphuthumayo kuzwelonke.
Mashi 14 - imingcele ekuhambeni kweYurophu yandiswa kubantu bakwamanye amazwe abasanda kuba se-United Kingdom nase-Ireland.
Imininingwane engaphezulu iyatholakala kuwebhusayithi yoMnyango Wezwe lase-US.
NgoMashi 15, uMnyango Wezempilo waseKenya umemezele ukumiswa kwakho konke ukuhamba kusuka emazweni abike amacala e-COVID-19. Yizakhamizi zaseKenya kuphela ezivunyelwe ukungena ezweni.
Ephendula i-COVID-19, uHulumeni waseNew Zealand umemezele ukuthi, abahambi abasha, abavela kwamanye amazwe abake baba khona, noma badlulisa i-Iran noma izwe laseChina ezinsukwini eziyi-14 ezedlule ngeke bangene eNew Zealand. Abahambi abaya eNew Zealand abavela kuwo wonke umhlaba, ngaphandle kweziningi zePacific Islands, kumele bazihlukanise lapho befika. Lesi silinganiso sizobuyekezwa ngoMashi 31.
Ukubhekana nokuqubuka kodlame lwe-COVID-19, uNdunankulu wase-Australia, uScott Morrison, umemezele imikhawulo eqinile yokuhamba, kubandakanya nesikhathi sokuyalelwa esiyingqayizivele sezinsuku eziyi-14 kubo bonke abafika emazweni aphesheya kusukela phakathi kwamabili ngeSonto, Mashi 15, kanye nokuvinjwa kokufika kwabahamba ngomkhumbi abavela kwamanye amazwe izinsuku ezingama-30.
Mashi 14 2020
NgoMgqibelo, Mashi 14, uhulumeni waseSpain umemezele ukuthi yonke iSpain izobekwa ngaphansi kwezimo ezivaliwe ukuze iqukethe leli gciwane.
Mashi 13 2020
NgoLwesihlanu, Mashi 13, uNdunankulu wasePoland umemezele ukuthi bonke abantu bakwamanye amazwe bavinjelwe ukungena ePoland izinsuku eziyishumi kusukela ngeSonto, Mashi 15, ukunqanda ukusakazwa kwe-coronavirus (COVID-19). Zonke izakhamizi zasePoland nabahlali bazovunyelwa ukubuyela kuleli kepha bazodingeka ukuthi babekelwe abantu bodwa izinsuku eziyi-14.
Ukusuka ngoMashi 13, 2020, uhulumeni waseNdiya umise wonke ama-visa akhona, ngaphandle kosopolitiki, isikhulu, i-UN noma izinhlangano zamazwe omhlaba, ukuqashwa kanye nama-visa eprojekthi, kuze kube ngu-Ephreli 15, 2020.
Mashi 11 2020
I-COVID-19 imemezele ubhubhane. NgoLwesithathu 11 Mashi, 2020, iWorld Health Organisation (WHO) imemezele ukuthi i-COVID-19 ingabonakala njengodlame. Ekhuluma esithangamini nabezindaba seCOVID-19, uMqondisi-Jikelele we-WHO uthe:
“Ubhubhane akulona igama okufanele ulisebenzise kalula noma unganaki. Yigama elithi, uma lisetshenziswe kabi, lingadala ukwesaba okungenangqondo, noma ukwamukelwa okungenasizathu sokuthi ukulwa sekuphelile, okuholela ekuhluphekeni nasekufeni okungenasidingo. Ukuchaza isimo njengobhubhane akushintshi ukuhlolwa kwe-WHO ngosongo olubangelwa yileli gciwane. Akuguquki okwenziwa yi-WHO, futhi akuguquki ukuthi amazwe kufanele enzeni. Asikaze sikubone ubhubhane olubangelwa yi-coronavirus. Lesi yisifo sokuqala esibangelwa yi-coronavirus. Futhi asikaze sikubone ubhubhane olungalawulwa, ngasikhathi sinye. ”
Isimo Sezimo Eziphuthumayo Esiphathelene Nezempilo Yomphakathi simemezelwe ukuphendula i-coronavirus (COVID-19). IPhilippines isimemezele isimo esiphuthumayo sezempilo ngemuva kokukhathazeka ngokuthi i-novel coronavirus isivele isakazekele engatholakali enhlokodolobha iManila nasezindaweni eziseduze nayo. Kuzoba nokuhlolwa okwengeziwe kwezempilo ezindaweni zokungena ezweni. Uma umuntu esola ukuthi unegciwane, kungadingeka ukuthi uhlale esibhedlela noma uvalelwe yedwa.
Mashi 9 2020
'Ungahambi' ngesexwayiso se-Iran ngenxa yokuqubuka kwe-COVID-19. I-Iran ibhekene nokuhanjiswa komphakathi okugcwele kwe-coronavirus (COVID-19). Ngemininingwane esesikhathini samanje mayelana nenani lamacala e-Iran, hlola umbiko we-WHO's Novel coronavirus. Izeluleko eziningi zokuhamba zikahulumeni ziphakamise izinga labo lezeluleko zokuthi 'Ungahambi' noma 'Phinda ubheke isidingo sakho sokuhamba'. Bheka imininingwane yakamuva evela kumeluleki wakho wokuhamba kahulumeni, bese ucabanga ngezeluleko zabo ngaphambi kokubhuka noma ukuhamba. Izindiza eziningi zikhanseliwe zisuka e-Iran. Thintana nomhlinzeki wakho wokuhamba ukuthola ukuthi izindiza zakho noma amacebo akho ayathinteka. Noma, hlola iTehran Airport Arrivals noma iwebhusayithi yeDepho ukuthola imininingwane yakamuva.
Mashi 8 2020
Ukuqubuka kuka-COVID-19 eThailand. Iziphathimandla zaseThailand zisebenza kanzima ukuqukethe ukusatshalaliswa kwe-COVID-19 ezweni. Ukuthola imininingwane esesikhathini ngamacala aqinisekisiwe e-COVID-19, hlola umbiko wesimo seWorld Health Organisation. Kusukela ngomhlaka 8 Mashi, 2020 kunamacala angama-50 aqinisekisiwe eThailand.
Mashi 6 2020
ICoronavirus (COVID-19) e-Italy. I-Italy inenombolo ephezulu kakhulu yamacala e-coronavirus (COVID-19) eYurophu, ngamacala angama-3,089 (Mar Mar wamanje, 5). Ukuze uthole izibalo zakamuva, hlola ne-World Health Organisation. IHhovisi Langaphandle lixwayisa ngakho konke ukuhamba kodwa okubalulekile kumadolobha ayi-2020 ase-Italy.
ICoronavirus (COVID-19) eJapan. Izeluleko eziningi zokuhamba zikahulumeni, ezinjengalezo zase-USA nase-Australia, ziphakamise izinga labo lezeluleko zokuthi "Vivinya kakhulu ukuqaphela" maqondana nokuhambela eJapan ngenxa yengozi enkulu yokuhanjiswa okuqhubekayo kwe-coronavirus (COVID-19) yendawo. Kusukela ngo-Mashi 4, kunamacala angama-317 kazwelonke aleli gciwane eJapan (kufaka phakathi abantu abangu-6), kwathi abantu abangama-705 bangena emkhunjini owaziwa ngokuthi yiDiamond Princess cruise owake wafika eYokohama bahlolwe ukuthi banalo leli gciwane.
Mashi 5 2020
Ungahambi ngesexwayiso seHaiti. Ngomhlaka 5 Mashi, 2020, uMnyango Wezwe laseMelika waphakamisa izinga lawo lezeluleko ku-Level 4 ukuthi "ungahambi" ngenxa yobugebengu, ukuqubuka kwezimpi zabantu kanye nokuthumba eHaiti. Kubalulekile ukuthi ulandele izeluleko zikahulumeni wakho lapho ubhuka noma uhlela uhambo. Abahambi abangaveli e-United States, hlola izeluleko zokuhamba zikahulumeni wakho ukuthola imininingwane efanele wena. Nazi izeluleko eziningana zokuphepha kokuhamba kwanoma ngubani oseHaiti:
Gwema imibhikisho noma imiboniso, engahle ibe nodlame
Phatha imali ekhawulelwe nawe phakathi nosuku, gcina impahla yakho eyigugu ivaliwe ngokuphepha endaweni yakho yokuhlala
Hamba nesiqondisi sendawo, iqembu labakhambi noma okungenani abantu ababili ngasosonke isikhathi
Uma uphangiwe, ungavumeli ukugwema ukufaka engozini ukulimala noma impilo yakho
Gwema ukuhamba ebusuku - hamba ngemoto
Qaphela izindawo eziyingozi eziseduzane nedolobha, ulalele izeluleko zabantu bendawo, abaqondisi noma abasebenzi bendawo yokuhlala.
Ukuwa kwezindiza kweFlyby. Umphumela we-coronavirus ekubhukeni kwendiza kufakazela utshani bokugcina bezindiza ezindiza zaseYurophu. Zonke izindiza zikhanseliwe.
Mashi 3 2020
Umsebenzi wentaba-mlilo eMount Merapi, Java. NgoLwesibili Mashi 3, iMount Merapi, intaba-mlilo esebenzayo kakhulu e-Indonesia yaqhuma esiqhingini saseJava, yathumela umlambo womlotha u-3mi-high (6km) esibhakabhakeni. Isikhumulo sezindiza edolobheni laseSolo sivalwe okwesikhashana, kuthinta izindiza ezine. Abahambi kanye nezakhamizi ezihlala eduzane naseMount Merapi, selulekwe ukuba zihlale okungenani i-1.8mi (3km) kude nomlomo we-crater ngenxa yengozi engaba khona yokugeleza kwe-lava kanye nokugeleza kwe-pyroclastic. I-ejensi yokucwaninga nge-Geology and Volcanology yase-Indonesia ayikhuphulanga izinga lokuqwashisa, njengoba iMerapi yayivele isezingeni lesithathu kakhulu ngenxa yomsebenzi oqhubekayo wentaba-mlilo.
Mashi 2 2020
'Ungahambi' ngesexwayiso se-Iran ngenxa yokuqubuka kwe-COVID-19. I-Iran ibhekene nokusatshalaliswa komphakathi okubanzi kwe-coronavirus (COVID-19), kanti ngoFebhuwari 29, 2020, kukhona amacala angama-593 e-coronavirus e-Iran. Izeluleko eziningi zokuhamba zikahulumeni ziphakamise izinga labo lezeluleko zokuthi 'Ungahambi' noma 'Phinda ubheke isidingo sakho sokuhamba'. Bheka imininingwane yakamuva evela kumeluleki wakho wokuhamba kahulumeni, bese ucabanga ngezeluleko zabo ngaphambi kokubhuka noma ukuhamba. Izindiza eziningi zikhanseliwe zisuka e-Iran. Thintana nomhlinzeki wakho wokuhamba ukuthola ukuthi izindiza zakho noma amacebo akho ayathinteka.
Mashi 1 2020
ICoronavirus kuthiwa yisimo esiphuthumayo sezempilo somphakathi emhlabeni jikelele. ICoronavirus yaqala ukuvela edolobheni laseChina eWuhan ngoDisemba ka-2019, futhi isisabalele kulo lonke elaseChina futhi manje sekuqinisekisiwe amacala amaningi emazweni amaningi esifundeni sase-Asia-Pacific kanye nasemazweni aseYurophu, eNyakatho Melika naseMpumalanga Ephakathi. Ngomhlaka 30 kuJanuwari 2020, ikomidi lezimo eziphuthumayo laqoqwa nguMqondisi-Jikelele we-WHO lavumelana ngokuthi ukuqubuka kwe-coronavirus “manje sekuhlangabezana nezindlela Zokuthola Okuphuthumayo Kwezempilo Yomphakathi” (PHEIC) ”. I-PHEIC imenyezelwe amahlandla ayisithupha selokhu yethulwa ngo-2005 kulandela ukuqubuka kwaSARS.
Igama elithi PHEIC lichazwa ngokuthi "isehlakalo esingajwayelekile" esinqunywa yile mithetho emibili: Ukwakha ubungozi bempilo yomphakathi kwamanye amazwe ngokusatshalaliswa kwezifo emhlabeni jikelele; futhi Ukuze ufune impendulo ehlelekile yamazwe omhlaba.
Februwari 29 2020
Ezempilo nokuphepha eThailand. Ngomhlaka 30 kuJanuwari 2020, i-WHO yasusa i-Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) ngenxa yokuqubuka kwesifo eqala ukuvela eWuhan, eChina. Kunamacala angama-19 aqinisekisiwe we-coronavirus eThailand (Febhuwari wama-42 wamanje), futhi inani lamacala asakazeka emhlabeni wonke kulindeleke ukuthi lenyuke. Uma uza eThailand kungekudala, landela izeluleko ezivela ku-World Health Organisation: geza izandla zakho ngokungaguquki, gcina ibanga okungenani le-29ft (3m) phakathi kwakho nanoma ubani okhophayo noma okhozayo, futhi uma unomkhuhlane, ukukhwehlela nobunzima ukuphefumula, funa usizo lwezokwelashwa ngaphambi kwesikhathi (shayela ngaphambi kokuvakashela udokotela wakho).
Februwari 28 2020
ICoronavirus inqunyelwe ukuhamba. IATA kushicilelwe uhlu oluvuselelwe ngemikhawulo yokuhamba ngenxa yokuqubuka kweCoronavirus. Uma unezinhlelo zokuhamba, hlola uhlu futhi nemiyalo yakho yohulumeni wasekhaya
ICoronavirus (COVID-19) eJapan. Izeluleko eziningi zokuhamba zikahulumeni, ezinjengalezo zase-USA nase-Australia, ziphakamise izinga labo lezeluleko zokuthi "Vivinya kakhulu ukuqaphela" maqondana nokuhambela eJapan ngenxa yengozi enkulu yokuhanjiswa okuqhubekayo kwe-coronavirus (COVID-19) yendawo. Kusukela ngoFebhuwari 26, kunamacala ayi-179 ezwe aleli gciwane eJapan (okubandakanya nokufa kwabantu abathathu), kanti abantu abangama-705 abebesemkhunjini owaziwa ngokuthi yiDiamond Princess cruise olindelwe eYokohama bahlolwe ukuthi banalo leli gciwane.
ICoronavirus (COVID-19) e-Italy. I-Italy inenani eliphakeme kakhulu lamacala e-coronavirus (COVID-19) eYurophu, anabantu abangaphezulu kuka-320. Ihhovisi Lezangaphandle manje lixwayisa ngalo lonke uhambo oludingekayo kodwa lokuya emadolobheni ayi-11 ase-Italy. 'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, uCastelgerundo kanye neSan Fiorano) kanye noyedwa eVeneto (Vo' Euganeo).
Februwari 25 2020
Ezempilo nokuphepha eThailand. Ngomhlaka 30 kuJanuwari 2020, i-WHO yasusa i-Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) ngenxa yokuqubuka kwesifo eqala ukuvela eWuhan, eChina. Kunamacala angama-19 aqinisekisiwe we-coronavirus eThailand, futhi inani lamacala asakazeka emhlabeni wonke kulindeleke ukuthi lenyuke.
Februwari 24 2020
ICoronavirus (COVID-19) eJapan. Izeluleko eziningi zokuhamba zikahulumeni, ezinjengalezo zase-USA nase-Australia, ziphakamise izinga labo lezeluleko zokuthi "Vivinya kakhulu ukuqaphela" maqondana nokuhambela eJapan ngenxa yengozi enkulu yokuhanjiswa okuqhubekayo kwe-coronavirus (COVID-19) yendawo. Kusukela ngoFebhuwari 24, kunamacala ayi-132 aqinisekisiwe aleli gciwane eJapan, kanti abantu abangama-691 abebesemkhunjini owaziwa ngokuthi yiDiamond Princess cruise obambeke eYokohama bahlolwe ukuthi banalo leli gciwane.
Februwari 23 2020
Ukuzamazama komhlaba okuyisilinganiso esingu-5.7 eduze komngcele weTurkey-Iran. NgeSonto 23 ngoFebhuwari 2020, kwaba nokuzamazama komhlaba okuyisilinganiso esingu-5.7 eduze komngcele waseTurkey ne-Iran empumalanga yeTurkey. Bangu-XNUMX abantu asebebulewe esifundazweni saseVan, abaningi balimala kanti nezakhiwo zabo eziyinkulungwane sezonakele. Izeluleko eziningi zokuhamba zikahulumeni, kufaka phakathi i-USA ne-Australia, zifake ohlwini lwaseningizimu-mpumalanga yeTurkey ngokuthi 'Phinda ucabange ngesidingo sakho sokuhamba' nezinye izingxenye ngokuthi 'Ungahambi' ngenxa yosongo lobuphekula nobugebengu.
Februwari 19 2020
Ukuqubuka kwekholera okuqhubekayo eTopiya. Ukuqubuka kwesifo sekholera okwenzeka njalo eTopiya kuholele ekufeni kwabantu abangama-76 kwalimaza izinkulungwane zabanye abantu kusukela ngo-Ephreli 2019. I-Ethopian Public Health Institute ibika ukuthi lokhu kuqubuka kwaba kubi ikakhulukazi esifundeni saseSomalia, eSouthern nase-Oromia. Ezinye izifunda ezithintekile kulokhu kuqubuka kwalezo zindawo kubalwa iTigray, Amhara, Harar kanye nenhlokodolobha, i-Addis Ababa. Ngokusho kweCenters for Disease Control and Protection, i-cholera bacterium ivame ukutholakala emanzini noma emithonjeni yokudla eye yangcoliswa amalunga aqhamuka kumuntu otheleleke ngekholera futhi kungenzeka ukuthi isabalale ngokuqondile isuka komunye umuntu iye komunye. Ukuqubuka kwezifo kungenzeka kusabalale ezindaweni ezinokungathuthwa kwendle, ukuphathwa kwamanzi nokuhlanzeka okunganele. Amacala amakhulu ikholera abonakala ngohudo olunamanzi nokuhlanza, okuthi uma kushiywe kungalashwa, kuholele ekulahlekelweni okusheshayo kwezikhukhula zomzimba kanye nomzimba. Uma uza eTopiya kungekudala, zivocavoca ngokuhlanzeka okukhulu. Khuluma nodokotela wakho wokuhamba ngaphambi kokuba uhambe uyobona ukuthi kugonyelwe umjovo wekholera. Uma uthola isifo sohudo, qapha kakhulu impilo yakho futhi ungakuvumeli ukuba kungaphathwa isikhathi eside kakhulu - amacala abedlulele angabulala. Qaphela ngokwengeziwe ukuthi udlani, futhi uphuze kuphela amanzi abilisiwe noma ahlanziwe. Yenqaba ama-ice cubes eziphuzweni. Phatha i-sanitizer yesandla, bese ugeza izandla zakho noma nini lapho ungakhona. Yidla kuphela ukudla okuhlanganiswe noma okuphekwe okusha futhi okuphekwe kushisa. Gwema izithelo noma imifino engabunjiwe, futhi ungadli amasaladi aluhlaza.
Februwari 18 2020
Ezempilo nokuphepha eThailand. Ngomhlaka 30 kuJanuwari 2020, i-WHO yasusa i-Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) ngenxa yokuqubuka kwesifo eqala ukuvela eWuhan, eChina. Kunamacala angama-19 aqinisekisiwe we-coronavirus eThailand, futhi inani lamacala asakazeka emhlabeni wonke kulindeleke ukuba lenyuke. Uma uza eThailand kungekudala, zijwayeze ukuhlanzeka okuhle, futhi uma uqala ukuzizwa izimpawu ze-coronavirus, gcina kude nabanye abantu, umboze konke ukukhwehlela nokunyenya, bese ufuna usizo lwezempilo ngokushesha.
Februwari 17 2020
ISiphepho Dennis sibanga ukuphazamiseka e-UK. Ihhovisi leMetwork likhiphe isexwayiso sezulu esiphuzi ezingxenyeni ezinkulu zase-UK njengoba kudlula iStorm Dennis esifundeni leso. Ukulandela iSiphepho uCiara ngesonto eledlule, okudale ukusikeka kwamandla kagesi okungaba yisigidi kanye nokuphazamiseka kokuhamba okusabalele, iStorm Dennis kuholele ekutheni kube nezibalo eziningi zezexwayiso kanye nezexwayiso ezibekelwa i-England neWales. Isimo sezulu esiqhubekayo singase sibangele ukuphazamiseka okuthe xaxa ezindizeni zakho noma ukuhamba ngaso. Hlala usesikhathini nemibiko yesimo sezulu bese uthinta i-airline yakho ukuthola ukuthi izindiza zakho zikhanseliwe noma zibambezelekile.
Februwari 10 2020
Izimo zezulu ezinzima ogwini olusempumalanga ye-Australia. I-Australia ibiphaphamele imililo ekuqaleni konyaka, kanti manje sekubhekeke kakhulu esimeni sezulu esishintshashintshayo esifundazweni esisempumalanga yeQueensland, New South Wales kanye neVictoria, kanye nesaziso sesiphepho (esivele sehliselwe phansi) esifundeni sasePilbara I-Western Australia. ENew South Wales, izifunda zaseSydney, iCentral Coast kanye neBlue Mountain zazinanyiswe imvula ephakathi kuka-200 no-400mm ukusuka ngo-9 ekuseni uLwesihlanu ngo-7 kuFebhuwari kuya ku-5 ntambama ngeSonto ngo-9 kuNhlolanja. Abezimo eziphuthumayo baphendule ngenani elikhulu kakhulu lezingcingo maqondana nezikhukhula kanye nokudilika komhlaba, futhi isimo sezulu sasendle sabangela ukubambezeleka kwezothutha ezingxenyeni zombuso. Hlala ubukele ku-Bureau of Meteorology ngesexwayiso sezulu kanye nokubikezela kwemvula, njengoba imvula enkulu kulindeleke ukuthi ingene phakathi nesonto lonke.
Februwari 9 2020
Imvula enamandla nomoya ovunguzayo womoya ofinyelela ngaphezu kwe-90mph ulethe izikhukhula eziningi kanye nokuphazamiseka kokuhamba njengoba iSiphepho uCiara sishaya e-UK. Izihlahla zadilizwa, izakhiwo zacekeleka phansi kwathi eminye izindlu kwadingeka ukuba idudulwe njengoba imifula idiliza amabhange abo. Izinkulungwane zabantu zashiywa zingenawo ugesi futhi nemicimbi yezemidlalo yakhanselwa ngenxa yesimo sezulu. Izindiza zibuye zakhansela izindiza ezingamakhulu, kuyilapho izinkampani zezitimela eziningana zikhuthaza abagibeli ukuthi bangahambi. Abagibeli bezikebhe baphinde babhekana nokubambezeleka nokukhanselwa, futhi abashayeli baxwayiswa ukuthi banakekele kakhulu. Izingxenye ezinkulu ze-UK zambozwa yisixwayiso se-amber somoya onamandla kakhulu, kanti iHhovisi leMetla leluleka ukuthi amagagasi amakhulu ezindaweni ezisogwini kanye nemfucumfucu ezindizayo ingadala ukulimala.
Februwari 5 2020
Izikhukhula esifundeni saseNingizimu South New Zealand
Izikhukhula zemvula kanye nemvula enkulu e-New Zealand's South Island ishiye izivakashi ezingamakhulu amaningana zaphoqeka, futhi kwaphoqa izakhamizi zakule ndawo ukuthi ziphume zimke ezindlini zazo. Iziphathimandla zixwayise ngezikhukhula eziningi esifundeni ngenxa yokunyuka kwezinga lamanzi emfuleni uMthethwa. Imigwaqo eminingi ivinjiwe, kwaphinde kwaphazamiseka imithombo kagesi ezindaweni ezithintekile, okubandakanya izindawo zokuvakasha ezidumile iMilford Sound neTe Anau. Bheka imibiko yesimo sezulu futhi ubheke izindaba zasendaweni uma usendaweni.
Januwari 30 2020
Ukugqashuka kweCoronavirus edolobheni laseWuhan, eSifundazweni saseHubei
Ngomhlaka 31 kuDisemba 2019, kwavela icala lokuqala lohlobo olusha lweCoronavirus eWuhan, eChina. Kucatshangwa ukuthi kunenkontileka kusukela ekuchayweni kwezilwane emakethe yasolwandle nasemakethe yenyama. I-World Health Organisation imemezele isimo esiphuthumayo sezomphakathi emhlabeni jikelele ngoJanuwari 30 2020. Isibalo sabantu abangenwe yileli gciwane siyaqhubeka ukukhuphuka, kanti kulindeleke nokuthi inani labantu ababulawa yileli gciwane linyuke. Amacala kubikwe nawo phesheya kwezilwandle. Amadolobha amaningi eChina avaliwe ukuvimbela ukusabalala kwe-coronavirus okungakaze kubonwe ngaphambili. Akukaziwa ukuthi kuzolunga isikhathi esingakanani, ngakho-ke uhlale usesikhathini nezindaba zasendaweni nabezindaba ukuze zilungiselelwe izinguquko zokuhlela izikhathi ezithile.
Januwari 28 2020
Ubukhulu 7.7 ukuzamazama komhlaba eziQhingini zaseCaribbean
NgoLwesibili, 28 Januwari 2020, ukuzamazama komhlaba okuyisilinganiso esingu-7.7 kwahlasela eningizimu-ntshonalanga yeNiquero eCuba nasenyakatho-ntshonalanga yeMontego Bay eJamaica ngabo-2.10pm (isikhathi sendawo). Lokhu kuzamazama komhlaba kwakunokujula okungama-6mi (10km). Izinduna zazizwakala edolobheni laseCuba elisempumalanga yeSantiago, esiQhingini saseCayman, kude kakhulu nentshonalanga yeJamaica, futhi kude naseMiami eFlorida. Kodwa-ke, akukho mibiko yokuqala yomonakalo omkhulu noma ukulimala okukhulu. Kungekudala nje ngemuva kokuzamazama komhlaba kwahlasela iCaribbean, isikhungo sokuxwayisa i-Pacific Tsunami waxwayisa ngamathuba amaza ayingozi we-tsunami aze afike ku-3ft (1m) ogwini lweBelize, Cuba, Honduras, Mexico, Jamaica, kanye neCayman Islands. Igagasi le-tsunami elingama-0.4 wamamitha (0.11 wemitha) labonwa ngokusemthethweni eGeorge Town eCayman Islands. Amagagasi eTsunami awabhekwanga eJamaica noma eDominican Republic, kanti ingozi ye-tsunami yadlula ngehora lesine ntambama ngoLwesibili.
Januwari 19 2020
Ngomhlaka 31 kuDisemba 2019, kwavela icala lokuqala lohlobo olusha lweCoronavirus eWuhan, eChina. Kucatshangwa ukuthi kunenkontileka kusukela ekuchayweni kwezilwane emakethe yasolwandle nasemakethe yenyama. Kusukela lapho, cishe babalelwa ku-300 abantu abangenwe yileli gciwane, kanti amacala futhi abikwa e-US, Thailand nase Japan. Uma usanda kuvakashela eWuhan noma endaweni ethathe njengosongo, gcina ibanga lakho kude nabanye abantu, umboze konke ukukhwehlela nokuthunga ngezicubu noma okokugqoka, bese ugeza izandla zakho njalo. Thintana nodokotela wakho ngokushesha. I-WHO ihlangana ngomhlaka 22 kuJanawari 2020 ukudingida ukuthi ngabe ukuqubuka kwalokhu kuba yisimo esiphuthumayo sezempilo yomphakathi futhi kufanele, uma kunjalo, nezincomo zabaphathi bayo.
Januwari 13 2020
IThaal Volcano ihlakaza umlotha eduze neManila
Iziphathimandla zasePhilippine zinxuse ukuthi "abantu bavuke ngokuphelele" bacishe baba yingxenye yesigidi ngasenhloko-dolobha yaseManila, ngemuva kokuthi intaba-mlilo isike umlotha wamakhilomitha angaba ngu-14 emoyeni ngeSonto bekhuza izexwayiso mayelana nokuthi kungaqhuma “ukuqhuma okukhulu”
Januwari 12 2020
I-Seismology Bureau iphakamise izinga lokuqwashisa ngeTaal Volcano
Abahambi abanamacebo okuvakashela ePhilippines noma njengamanje abakhona ezweni badinga ukuqaphela umsebenzi ongaba khona wentaba-mlilo kusuka eThaal volcano, etholakala ngama-37mi (60km) eningizimu yeManila esiqhingini saseLuzon. NgeSonto, ngomhlaka 12 kuJanawari 2020, isikhungo sombuso seismology saphakamisa izinga lokuqwashisa ngeTaal volcano saya ku-4 kulandela ukuxoshwa komusi nomlotha.
Januwari 8 2020
Indiza yase-Ukraine Boeing yashona e-Iran
Abantu abayi-176 bafile. Izisulu zifaka ama-Iranians angama-82, abantu baseCanada abangama-63, ama-Ukraine angama-11, abaseSweden abayi-10, ama-Afghan amane, amaJalimane amathathu nabantu abathathu baseBrithani ngokusho kukaNgqongqoshe Wezangaphandle wase-Ukraine.
Januwari 7 2020
Ukuzamazama komhlaba okuyisilinganiso esingu-6.4 kugadla ePuerto Rico
Lokhu kuzamazama komhlaba, okushaye ngo-4: 24 ekuseni, kudale ukuthi kucinywe ugesi, kulimaze kakhulu izindlu nezakhiwo, futhi kushiye ingxenye enkulu yalesi siqhingi ngaphandle kwamanzi. Sekuvele ukuzamazama okuningana, okuphakathi kuka-4.5 no-5.8. Lokhu kulandela ukuzamazama komhlaba oku-5.8 ngoMsombuluko, ngoJanuwari 6, okudale ukuwohloka kwePunta Ventana, itshe lemvelo lomgwaqo nokuyinto edonsa izivakashi ezinkulu. Umbusi uVasquez umemezele isimo esiphuthumayo. ICaribbean iyindawo esebenzayo yokuzamazama komhlaba, futhi ukuzamazama okwengeziwe kungenzeka, kanye namandla ezitsunami. Lungela ukuphazamiseka ezinhlelweni zokuhamba, bese uthintana nomhlinzeki wakho wokuhamba ukubona ukuthi amasheduli aseshintshile.
Januwari 6 2020
IPuerto Rico yazamazama ngokuzamazama komhlaba okuyisilinganiso esingu-5.8
Ukuzamazama komhlaba okulimazayo kuhlasele iPuerto Rico ekuqaleni kukaMsombuluko, kanti kulindeleke ukuthi kube nokuzumeka okungatheni. Ukuqhaqhazela okukhulu okungu-5.8 kwenzeka ngo-5: 32 ekuseni e-ET, kusho i-US Geological Survey. Sasisondele kumamayela ayi-8 ngaseningizimu-mpumalanga ye-India, ePuerto Rico, ekujuleni kwamakhilomitha angaba ngu-3.7 ngaphansi komhlaba
Januwari 4 2020
AmaHhovisi aphesheya akhipha isexwayiso sokuhamba nge-Iran ne-Iraq
Amazwe ehlukene anxusa izakhamizi zawo ukuthi zigweme konke ukuhamba ziye e-Iraq, ngaphandle kwesifunda saseKurdistan, futhi kugweme konke ukuhamba okuya e-Iran ngemuva kokushona kukaQassem Soleimani.
Januwari 3 2020
Izililo zase-Australia 'ezinolaka' zizoba zimbi kakhulu kule mpelasonto.
Izinkulungwane zabavakashi kanye nezakhamizi zathutha izingxenye zase-Australia ngoLwesihlanu njengoba bekushisa okushisa nomoya onamandla kulindeleke ukuthi kube kubhebhethekisa isimo somlilo wasendle ngempelasonto.
NgoDisemba 20 2019
Ukudangala u-Elsa wagasele phezulu iPortugal
Zingaphezu kuka-5,400 2 izigameko ezenzeka, iningi lazo eziwa esihlahleni, kubikwe ezweni lasePortugal kusukela ngoLwesithathu, kulandela isimo sezulu esingesihle, ngokusho kweNational Emergency and Civil Protection Authority (ANEPC) .21 abantu kubikwe ukuthi bafile, izexwayiso zisendaweni, kuze kube manje saturday Dec. XNUMXst.
NgoDisemba 19 2019
I-Australia eshisa izikhotha
Amarekhodi okushisa wesikhathi sonke aphulwe futhi. Isimo esiphuthumayo kumenyezelwe eNew South Wales, e-Australia, ngovalo lokuthi ukushiswa kwamatshe okucekela phansi kuzokwandisa isimo esibucayi somlilo osesiqongweni
NgoDisemba 11 2019
Australia isethwe isikhathi esivutha umlilo ngomlilo ehlobo kuleli hlobo
Ngaleli hlobo, Australia kusetshenziselwe inkathi yomlilo we-bush eqinile. Selokhu yaqala inkathi yomlilo wehlathi lase-Australia i-2019, amahektha ayizigidi ezingama-2.9 asashise ogwini olusempumalanga lwaseNew South Wales naseQueensland - amahektha we-200,000 asha eQueensland, kanye namahektare angama-2.7 ayisigidi e-NSW. Kunzima ukuqonda ukuthi le mililo idale umonakalo ongakanani, kepha nge-10 ngo-December 2019, kushonile abantu abayisithupha kanti sekudilizwe nemizi engaphezu kwe-680 eNew South Wales. Ngenkathi kubukeka sengathi izwe lonke liyasha, akunjalo. Sydney, nezinye izindawo zasemadolobheni ezingazihlanganisi izindawo ezinamabhasi, ziphephile. Kodwa qaphela lapho uhamba phakathi kwamadolobhana, imililo ingadala ukuvalwa komgwaqo. Uma uhambela e-Australia ngaphezulu kwehlobo, qiniseka ukuthi izinhlelo zakho ziyaguquguquka. Amililo asabalala ngokushesha, futhi kwesinye isikhathi le mililo ingadala ukuvalwa kwemigwaqo emikhulu ngaphandle kwesixwayiso. Landa uhlelo lokusebenza leMililo Eduze Kwami, bese unaka kakhulu amazinga ezingozi zomlilo. Uma imigwaqo ivaliwe, amabhasi ahlelwa kabusha noma izitimela zikhanseliwe, kuzodingeka ulinde kuze kube yimigwaqo evulekile futhi
NgoDisemba 9 2019
Ukuqhuma kwentaba-mlilo e-White Island
I-Whakaari / i-White Island E-New ZealandIntaba-mlilo esebenza kahle kakhulu, futhi yaqhuma ngaphandle kwesixwayiso ngoMsombuluko, 9 Disemba 2019. Lesi siqhingi sise29mi (48km) ngasogwini olusempumalanga yeNorth Island, e-Bay of Plenty. Kugcine ukuqhuma ku-2001. Ngesikhathi sokuqhuma kwalesi sehlakalo, abantu be-47 babekulesi siqhingi noma eduzane. Kuqinisekiswe ukuthi abantu abayisithupha beshonile, abantu abayisishiyagalombili batholakale, kanti abakwa31 basesibhedlela. Uma useNorth Island eduzane neBay of Plenty, amaphoyisa aseluleke ngokuthi umlotha wentabamlilo ungaba yingozi enkulu yezempilo.
NgoDisemba 6 2019
Kuqubuka imasisi eSamoa
Uhulumeni wase Samoa umemezele isimo esiphuthumayo kulandela ukushona kwe62 okuxhunyaniswe nesimungumungwane. Kunemikhawulo emibuthanweni yomphakathi, futhi izikole zivaliwe. Kube nokushona kwe54 kufaka phakathi izingane ezineminyaka emine noma ngaphansi, futhi kubikwa ukuthi amacala angaphezu kwe-4,000 selokhu kuqale lo mshophi ngo-Okthoba 2019. Uma uza eSamoa kungekudala, kubalulekile ukuthi uqiniseke ukuthi ukugonywa kwakho kusesikhathini. Lokhu kuhlobene ikakhulukazi nakwisiqhingi sezwe laseSamoa, lapho cishe ingxenye yesithathu yabantu bayo be-200,000 ingagonywa. Izimpawu zemasisi zibandakanya umkhuhlane, ukuqubuka okubomvu, ukukhathala, ikhala eligijimayo nokukhwehlela komile.
NgoDisemba 5 2019
Imibhikisho ku France
Amakhulu ezindiza akhanseliwe kanti nokunye ukuthutha kuzophazamiseka eFrance ngesikhathi kunesiteleka sezinsuku ezintathu, esiqale nge-5 Disemba, 2019. Iziteleka zizothinta ukuhamba kwezindiza, izitimela, izinsiza zaseParis Metro nezikebhe. Abasebenzi baphume bebhikisha e-Eiffel Tower, nayo evaliwe. Uma uzungeza iFrance ngalesi sikhathi, hlukana nemibhikisho yezombusazwe noma imiboniso, gwema izixuku ezinkulu ezingaphenduka nodlame ngokungazelele, futhi zilungele ukuphazamiseka ohlelweni lwakho.
NgoDisemba 3 2019
I-typhoon Kamuri (endaweni yakamuva ebizwa ngeTyphoon Tisoy) yenze ukuwa komhlaba Philippines futhi kulindeleke ukuthi ilandeke kudlule naseCentral Philippines naseningizimu yeLuzon emahoreni alandelayo e-24. Ngaphambi kwamabili ngoMsombuluko 2 Novemba 2019, abantu abangaphezu kwe-200,000 sebekhishwe. Izindiza zikhanseliwe, futhi abahambi kufanele balindele ukubambezeleka nokuphazamiseka ukuhamba ngezinhlelo zokuhamba phakathi nesonto lonke
Ukhetho olwenziwe eNepal
NgoNovemba 30, i-2019 kwaba nokhetho lokuchibiyela eNepal. Amakhetho abanjwe ngokuthula, ngaphandle kokuqhuma okuncane kathathu okubikwa ukuthi kusondele eziteshini zokuvota. Akekho owalimala. Ngezikhathi zokhetho eNepal, kungaqubuka imibhikisho nemibango yezepolitiki.
Novemba Novemba 26 2019
Ukuzamazama komhlaba okukhulu kwe-6.4 kuye kwehlela i-Albania
Yehlisa izakhiwo futhi yashiya abantu bevalelekile ngaphansi kwemfucumfucu. Okungenani abantu abayisithupha bashonile
Novemba Novemba 25 2019
Iziphepho ukuphazamisa ukuhamba kuka-Thanksgiving entshonalanga nasenkabeni I-USΑ.
Izigidi zabantu baseMelika zizodonsa imvula, iqhwa, umoya, kanye nezivunguvungu ezinamandla.
Novemba Novemba 22 2019
I-French Riviera ekuqwashiseni ngesimo sezulu
IRiviera iphinde ibhekane nemvula enkulu kanye nezivunguvungu namuhla kusihlwa (ngoLwesihlanu) nakusasa (ngoMgqibelo). IMeteo France ikhiphe isexwayiso se-Orange, okuyisigaba sesithathu esiphakeme kunazo zonke emazingeni amane okuqwashisa, ngemvula enkulu, izikhukhula kanye nezivunguvungu.
Ababhikishi bathathe imigwaqo yenhloko-dolobha yaseColombian, iBogotá, ngoNovemba 21, 2019, bakhungathekile ngokukhishwa okuncane kwesivumelwano sokuthula se2016 nezihlubuki zeFARC, nokubhikisha kuhulumeni wamanje. Imibhikisho ibinokuthula kakhulu kuze kube nokuqubuka kwesikhumulo sezindiza ngaseBogotá phakathi kwababhikishi namaphoyisa abezimbangi.
Novemba Novemba 21 2019
Uhulumeni wase Samoa umemezele isimo esiphuthumayo kulandela ukushona kwe15 okuxhunyaniswe nesimungumungwane. Kunemikhawulo emibuthanweni yomphakathi, futhi izikole zivaliwe. Ingane eyodwa endala ne-14 ishonile, futhi kubikwe amacala angaphezu kwe-1,000. Uma uza eSamoa kungekudala, kubalulekile ukuthi uqiniseke ukuthi ukugonywa kwakho kusesikhathini.
Novemba Novemba 18 2019
I-Air Canada ikhipha izexwayiso zokuhamba ze Montreal, Toronto, Ottawa
"Izindiza zingathintwa yiqhwa lemvula kanye nemikhawulo elandelwayo yokulawula ukuhamba kwezindiza"
Novemba Novemba 15 2019
i-Hong Kong Imibhikisho enodlame yanda ethinta amabhizinisi nokuhamba komphakathi
Isexwayiso sokululeka kwezinga lokuhamba nge-2
Novemba Novemba 14 2019
Kugcwala ngaphakathi Venice
IVenice iqophe i-6.1ft (1.87m) yamanzi kulandela izinsuku zemvula enkulu. Lawa ngamazinga wamanzi aqoshwe kakhulu kusukela nge-1966 lapho kwakubhalwa khona i-6.3ft (1.94m) ye-whpping. Izikhukhula zidale umonakalo omkhulu odla izigidi zama-euro, ikakhulukazi eSt Marks Basilica esesikhukhulwe amahlandla ayisithupha kuphela eminyakeni eyi-900. Uma uhambela iVenice kungekudala, uhlale usesikhathini nezindaba zasendaweni futhi wazi ukuthi isimo sezulu esibi sibikezela izinsuku esizayo.
Novemba Novemba 12 2019
Izimpi zombango eBolivia ngenxa yezingxabano zezepolitiki
IBolivia ibhekene nezimpi zombango ngemuva kwengxoxo yehlulekile, okuholele ekutheni kube nemibhikisho elwa nohulumeni ezweni lonke. Izingxabano zezepolitiki nezenhlalo zibeka engcupheni enkulu yokuphepha kwakho uma uhamba eBolivia. Qaphela izixuku ezinkulu ezibuthana ezindaweni zasemadolobheni, ngoba zingaphenduka udlame kungazelelwe. Hlala kude nemibhikisho noma imiboniso.
Novemba Novemba 11 2019
Izimo zomlilo eziyinhlekelele eNSW, Australia
Umlilo ucekele phansi izindlu ze-150 futhi zabulala abantu abathathu kwi-NSW ngempelasonto eyinhlekelele yokuqubuka komlilo ogwini olusempumalanga ye-Australia. Imimoya enamandla kanye namazinga okushisa asondele kwi-104ºF (40ºC) abikezela ngoLwesibili 12 Novemba 2019 esifundeni iGreater Sydney naseGreater Hunter ye-NSW - lokhu kubandakanya izifunda ze-Blue Mountain kanye neCentral Coast.
Novemba Novemba 8 2019
Ileveli 3 -Reconsider Travel to Bolivia
Imiboniso ephindaphindayo, iziteleka, izivimbi zomgwaqo kanye nemashi.
Novemba Novemba 4 2019
Ileveli 4 - Ungahambeli eSyria
Ubushokobezi, umbhikisho womphakathi, ukuthumba, izimpi ezihlome ngezikhali.
Okthoba 28 2019
Imililo yasendle eCalifornia: isimemezelo esiphuthumayo sezwe lonke
Imimoya enamandla ibhebhetheke imililo yasendle eNyakatho naseNingizimu California, ichithe amakhaya nomhlaba, futhi iphoqa abantu be-185,000 ukuba baphume. Kunokucima ukoma eNyakatho California ngenxa yePacific Gas & Electric Co yokuvala amandla kubantu abayizigidi ezimbili ukugwema imililo eminye ebangelwa izintambo zikagesi eziwayo. Umoya onamandla kulindeleke ukuthi uhlale kuze kube uLwesithathu, ngakho-ke kubalulekile ukuthi ulalele izeluleko zabacimi bomlilo, futhi uhlale usesikhathini nemibiko yezindaba yendawo.
Okthoba 22 2019
Abahambi kufanele bazi ngemibhikisho ngaphakathi Barcelona asebe nodlame. Ababhikishi bathathe imigwaqo ngemuva kokugwetshwa kwabaholi abayisishiyagalolunye abahlukanisi bamaCatalan ngecala lokuvukela umbuso ngokwenqatshelwa kwenhlolokhono yenkululeko eyayivinjelwe ngo-Okthoba 2017. Abaholi banikezwe izigwebo ezinde zeminyaka ye-13, nokuthukuthelisile abalandeli babo.
Okthoba 21 2019
AmaRiots eChile ngaphezu kokungalingani kwemali
Uhulumeni waseChile umemezele isimo esiphuthumayo ezweni. Kuqubuke imibhikisho enodlame ngempelasonto eSantiago nakwamanye amadolobha amakhulu, njengoba imibhikisho yokulwa nokungalingani kwemali inyuka nezimali zokuhamba ziphelelwa ngamandla.
Okthoba 10 2019
Isimo esiphuthumayo mayelana noxhaso lwamafutha e-Ecuador
I-Ecuador isimemezele isimo esiphuthumayo kulandela imibhikisho yamanani entengo kaphethiloli equbuke ngemuva kwesinqumo sikamongameli we-Ecuadorian sokuqeda uxhaso lukagesi ngemuva kweminyaka eyi-40 Amanani edizili nophethiloli kulindeleke ukuthi akhuphuke kakhulu. Kubalulekile ukuthi abahambi bayazi ngalesi simo, futhi bahlale besesimweni ukuze bagweme noma yiziphi izinkathazo. Okwamanje azikho izexwayiso ezisemthethweni ezisetshenziswayo, noma kunjalo kukhona ukubambezeleka okukhulu kwezitimela kanye neziteleka.
ISiphepho uHagibis eJapan
ISpain typhoon Hagibis kulindeleke ukuthi ilethe imvula enkulu kanye nemimoya evikelekile ye-120mph njengoba ishaya Japan, namathumbu asondele ku-149mph. Uma useJapan ngeNdebe Yomhlaba yeRugby, khuluma nabasebenzi bakho yokuhlala noma umphathi wezohambo ngezinhlelo zabo eziphuthumayo nezindawo zokukhosela lapho kunesidingo sokufuna indawo yokukhosela.
Septhemba 28 2019
Imibhikisho eHong Kong
Imibhikisho ihlelwe ngempelasonto ye-28 Septhemba kanye neholide lomphakathi le1 Okthoba National Day. Hlala kude nezixuku zabakhombisi. Yazi ukuphazamiseka ezinhlelweni zakho zokuhamba noma ulindele ukubambezeleka okubalulekile kwethrafikhi uma uzungeza i-Hong Kong ngalezi zinsuku.
Septhemba 23 2019
Umphathi wezohambo uThomas Cook useyekile ukuhweba
I-150,000 Britons elinganiselwa phesheya ilindele ukubuyiselwa. Bheka izinhlelo zakho zokuhamba uma zibhukelwe nguThomas Cook.
Septhemba 21 2019
Kuqhume igesi izinyembezi eGibhithe
Kudonswe igesi izinyembezi ukuze kusakaze ababhikishi ngaphakathi Egypt, kweminye imiboniso yokuqala selokhu uMongameli Abdul Fattah al-Sisi wathatha izintambo ku-2014. Amakhulu amaGibhithe agcwalisa iTahrir Square eCairo - indawo esemqoka ye-2011 Revolution yaseGibhithe - efuna asule esikhundleni. Amademoni abuye abikwe nakwezinye izindawo ezweni lonke. Kube nokuboshwa okuthile, kepha abanye abantu basala emigwaqweni.
Bus Ukuqhuma kwamabhomu kubulala abantu base12 eduzane nase-Iraqi idolobha laseKerbala
Ibhomu eliqhume ibhomu labulala okungenani abantu be-12 kwalimala abanye abaningana ngoLwesihlanu eduze kwedolobha elingcwele lase-Iraq eKerbala, eningizimu yeBaghdad, kusho isitatimende esivela kwabezokuphepha e-Iraq. Ukuhlaselwa okunjalo kumaSulumane amaShi'ite eningizimu ye-Iraq bekuyivelakancane eminyakeni eyedlule, ikakhulukazi ngemuva kokwehlulwa komhlaba okwenziwe yi-Islamic State e-Iraq e-2017 kanye nomgudu wabanduleli bawo be-al Qaeda maphakathi nama-2000s.
Septhemba 9 2019
Ama-Bushfires eQueensland Australia
Izakhamizi zePeregian Beach neMarcus Beach zitshelwe ukuthi ziphume zibheke ngaphesheya zibheke eNoosa.
Isivunguvungu Faxai sesidonsa kanzima eJapan, siletha imimoya enamandla nemvula enkulu, okwenza izikhukhula nezinhlelo zazehlela ezinhlelweni zokuhamba eTokyo. Uma useJapan, uhlale usesikhathini nemibiko yezindaba yendawo bese uqapha isimo.
Septhemba 1st 2019
ISiphepho Dorian isigaba sesiphepho se-5
ISiphepho uDorian siqinise saba yisiphepho esinamandla soGaba 5 njengoba sehla Bahamas NgeSonto ekuseni ngemimoya enamandla evikelekile ye-185 mph. Abantu baseMelika abangaphezu kwezigidi ezingama-20 bangakuzwa ukuthinta kwesiphepho ezinsukwini ezimbalwa.
Imililo yasendle kulo lonke elase Indonesia
Eduze kwe-700 izindawo zokuzithambela zikhonjwe ezindaweni ezithinta umlilo eSumatra Kalimantan naseziqhingini zaseRiau.
Imililo iyaqhubeka nokuvutha ngaphakathi EBrazil 's Amahlathi emvula aseAmazon. Izifundazwe ezimbili ezise-Amazon sezivele zamemezela isimo esiphuthumayo: i-Acre ne-Amazonas.
Zonke izindatshana zivela